IFTIINKACUSUB.COM: Ma taqanaa Haweenaydii kunka nin u dhig-maysay ?
Bismillah: Haweenaydan ka qiimaha badani waa Umu-Camaara, Nusayba bintu Kacab ibnu Camru ibnu Cawf ibnu Manduul. Waa saxaabiyad reer Ansaareed ah, kana ah qabiilka reer Khazraj, ee reer bani Najaar.
"kuwiina dhib masaarra kuu yimid inaad xambaarto (Gaadiid siisid) markaas aad ku tidhi ma helayo waxaan idinku xambaaro, markaas jeedsadeen iyagoo indhahoodu la burqami oohin murugo (darteed) inayna helin waxay bixiyaan." [Towbah:92]
Wuxuu yidhi wiilkii Umu-Camaara dhashay ee Cabdilaahi ibnu Zayid: "maalintaas dhaawac ayaa isoo gaadhay, markaasbay hooyaday soo oroday ayadoo meeshii dhaawacantay maro ku duubtay, markaasuu nabigu (scw) yimid oo igu dhahay: kac wiilkaygoow oo dagaalan. Wuxuuna yidhi: yaa awoodi karaya waxaas oo dhan aan ka ahayn Umu-camaara!!
Goobtaas ayaa waxa dhaawac wayn kusoo gaadhsiiyey Umu-Camaara ninkii habaarka qabay ee ibnu Qami’ah loogu yeedhi jiray, oo seef kaga dhuftay garabka, sidaasbayna ku dhaawacantay, Ilaahay raali haka ahaadee. Marka dhaawacaasi uu soo gaadhay Umu-Camaara ayuu nabigu ku dhahay wiilkeedii Cabdilaahi: "Kac oo hooyadaa nabarkeeda dhay oo duub, markaasuu dhahayna: "Ilaahayow reer Umu-Camaara rafiiqayga Jannada ka yeel."
WD: Abdulaziz Mohamed Oogle.